Raw Liothyronine sodium (T3) poda Vagadziri & Vanotengesa - Fekita
Liyronronine inogadzirwa nehutori hwehomoni (T3) inoshandiswa kurapa hypothyroidism uye myxedema coma. Inoshandiswawo seurongwa hwekuwedzera mukurapa Major Depression Disorder kana inoshandiswa pamwe chete nevanorwara.
Raw Liothyronine Sodium (T3) powder (55-06-1) Tsanangudzo
Raw Liothyronine Sodium (T3) pfupa yakagadzirirwa imwe yehomoni mbiri dzakagadzirwa nehutachiona, triiodothyronine. Inoshandiswa mukurapa vanhu vane hypothyroid (musaita mahomoni ehutoni akakwana). Utachiona hweHyroid dzinowedzera metabolism (basa) yemasero ese ari mumuviri. Mumwana mucheche, mwana achangoberekwa uye mwana, mahomoni ehutachiona anokurudzira kukura uye kukura kwemashuga. Muvanhu vakuru, mahomoni e thyroid anobatsira kuchengetedza basa reropi, kushandiswa kwezvokudya nemuviri, uye kutonhora kwemuviri. Yakashandiswawo kubata dzimwe mhando dzehutano hwehutano (dzakadai semamwe marudzi eGoiters, kenza yekanda). Inogonawo kushandiswa kuedza mamwe marudzi ezvirwere zvehutano. FDA yakagamuchira liothyronine muna May 1956.
Kemikari Name 5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, sodium salt (1: 1), 5-diiodo- L-Tyrosine
muchiso Name Cytomel, Triostat
Kirasi yeMishonga cytochrome P450 inhibitor, Anopikisana, anesthetic (munharaunda)
Molecular Wsere 672.96
Kunyorera Point 205 ° C (chirevo) (lit.)
Biological Half-Life pamusoro pe2-1 / 2 mazuva
ruvara Yakachena kusvika paPale Brown
Skukodzera 4 M NH4OH mu methanol: 125 g / 5mL, yakajeka, tsvuku-tsvuku
APane Yakashandiswa kurapa utachiona husingaitiki (hypothyroidism)
Chii chinonzi Raw Liothyronine Sodium (T3) powder (55-06-1)?
Raw Liothyronine Sodium (T3) pfupa yakagadzirirwa imwe yehomoni mbiri dzakagadzirwa nehutachiona, triiodothyronine. Inoshandiswa mukurapa vanhu vane hypothyroid (musaita mahomoni ehutoni akakwana). Utachiona hweHyroid dzinowedzera metabolism (basa) yemasero ese ari mumuviri. Mumwana wakaberekwa, mwana achangoberekwa uye mwana, mahomoni ehutachiona anokurudzira kukura uye kukura kwemashuga. Muvanhu vakuru, mahomoni e thyroid anobatsira kuchengetedza basa reropi, kushandiswa kwezvokudya nemuviri, uye kutonhora kwemuviri. Yakashandiswawo kubata dzimwe mhando dzehutano hwehutano (dzakadai semamwe marudzi eGoiters, kenza yekanda). Inogonawo kushandiswa kuedza mamwe marudzi ezvirwere zvehutano.
Raw Liothyronine Sodium (T3) powder (55-06-1) Dosage
Inorayirwa Dosage yeHypothyroidism
Inotenderwa kutanga kuenzanisa ndeye 25 mcg orally kamwe zuva nezuva. Wedzerai chiremba ne 25 mcg zuva rega rega maZV 1 kana 2, kana zvichidiwa. Iyo inowanzochengetedza chirwere ichi 25 mcg kusvika 75 mcg kamwe zuva nezuva.
Kune vakwegura vakwegura kana varwere vane chirwere chemwoyo chinotanga, tanga neYYTOMEL 5 mcg kamwe zuva nezuva uye kuwedzerwa ne 5 mcg increments panguva dzakatarisirwa.
Serum TSH haisi yekutendeseka kwechiYTOMEL kukosha kukwana muvarwere vane chikamu chepamusoro kana chepamusoro hypothyroidism uye havafaniri kushandiswa kuongorora kurapa. Shandisai serum T3 level kuti uone kutarisira kukwana kwehutano muhuwandu hwevarwere.
Iko inotenderwa kutanga kuyerwa ndeye 5 mcg kamwe zuva rega rega, ne 5 mcg inowedzera humwe 3 kune mazuva 4 kusvikira mhinduro inoda kuwanikwa. Vana vacheche vane mwedzi mishomanana vangada 20 mcg kamwe zuva nezuva kuchengetedza. Pachine 1 gore remakore, 50 mcg kamwe zuva zuva rinogona kudiwa. Pamusoro pe3 yemakore emakore, chirwere chakakwana chizere chinogona kudiwa [ona Shandisa mu Specific Populations (8.4)].
Vachecheche (0 kusvika kumwedzi 3) Pangozi yekukundikana kweCardiac:
Funga nezvemauto ekutanga mazamu mumucheche ari panjodzi yekushayiwa mwoyo. Wedzerai chiremba sezvinodiwa kubva pakiriniki uye mairabheni.
Vanachiremba vari pangozi yekushaya utano:
Kuti udzikise ngozi yehutachiona muhutano hwevana, tanga pane imwechete yechina inokurudzirwa yakazara inoshandiswa, uye inowedzera pavhiki yega yega yechina-yega inenge yakarongedzerwa inoshandiswa kubhadharwa kusvika nguva yakazara inokurudzirwa inoshandiswa.
Pre-iripo Hypothyroidism: Utachiona hweHymone inodhaka inogona kuwedzera panguva yekuzvitakura. Itai serum TSH uye free-T4 mushure mokunge pamuviri uchisimbiswa uye, zvishoma, panguva imwe neimwe miviri yekubata. Mune varwere vane primary hypothyroidism, shandisa sirum TSH mumutambo we-trimester-specific reference range. Kune varwere vane serum TSH pamusoro pemutengo wakatarwa we-trimester-mahwanda, wedzerai muyero wehomoni yehomoni uye kuenzanisa TSH mavhiki ose e4 kusvikira chiitiko chakachengetwa chikazosvika uye sirum TSH iri mukati mehutatu hwakarongeka. Deredza utachiona hwehomrosi inotanga kutora pamuviri pakarepo mushure mokuberekwa uye kuyera serum TSH mazinga 4 kusvika kumavhiki e8 mushure mekunge apera kuitira kuti utachiona hwehomrosi huve hwakakodzera.
Inorayirwa Dosage yeTSH Kudzvinyirira muEt Differentiated Thyroid Cancer
Chirwere cheYYOMOMEL chinofanira kutarisa TSH mazinga mukati mekuda kurapa. Izvi zvingada madhasi akakwirira, zvichienderana nechinangwa chekutsvaga kweTSH.
Inorayirwa Dosage yeTyroid Suppression Test
Nhamba yakakurudzirwa ndeye 75 mcg ku 100 mcg zuva rezuva re7, uye inonzi radioactive iodine inotanga kugadziriswa kare uye mushure mekutonga kwezuva 7 yeYYTOMEL. Kana utachiona hunoita basa, radioiodine inotora inodonha zvakanyanya mushure mekurapa. A 50% kana kuti kudarika kukuru kwekugadzirisa kunoratidza chidimbu chetachiona-pituitary axis.
Kuchinja kubva kuna Levothyroxine kuenda kuYYOMOMEL
CYTOMEL inotanga kushanda nekukurumidza kwezviito zveimwe hurongwa hwehutachiona hunogona kuramba huchiita kwemavhiki ekutanga pashure pokutanga chirongwa cheYTOMEL. Paunoshandisa murwere kuenda kuCYTOMEL, rega chirwere chinonzi levothyroxine uye utange CYTOMEL pakaderera. Zvishoma nezvishoma kuwedzera chirwere cheYIYOMOMEL maererano nemhinduro yomurwere.
Kuongorora TSH uye Triiodothyronine (T3) Nhamba
Ongorora kuwanika kwekurapa nekuongorora nguva nenguva yeongororo yevashandi uye kliniki yekuongorora. Kurambira kuchipatara uye laboratory uchapupu hwokuti hypothyroidism pasinei nekuonekwa kwakakwana kwemauto echiYTOMEL kunogona kuva uchapupu hwekushaya kukwana kwakakwana, kusabvumirana kwakashata, kushandiswa kwezvinodhaka, kana kusanganiswa kwezvinhu izvi.
Muchirwere chevanhu vakuru vane primary hypothyroidism, chengetera serum TSH nguva nenguva mushure mekutanga kwechirapa kana chero kuchinja kwemuti. Kuti uongorore kupindura kwechipatara kusati kwaitika TSH isati yava nemukana wekupindura kana kana mamiriro ehu murwere wako achifanira kuongororwa asati apera, chiyero che T3 chakanaka chakanakisisa. Muchirwere mune hutano hwakagadzikana uye yakakodzera kuchinjwa, kuongorora kliniki uye kugadziriswa kwezvinyorwa zvehupenyu zvose 6 kusvika ku12 mwedzi uye chero pese pane kuchinja mumamiriro ekurapa emurwere.
Muchipatara varwere vane hypothyroidism, chengetedza kukwana kwekugadzirisa kurapwa nekuyera serum TSH uye T3 mazinga. Nevana vane chirwere chemakore matatu nemakore ekuberekwa, zvakakurudzirwa kutarisa ndezvimwe 3 kusvika ku12 mwedzi mushure mekunge, zvichienderana nehutano hwakasimba kusvikira kukura uye kuberekwa kwapera. Kuteerera kusina kunaka kana tsika dzisina kunaka dzingada kuwedzera kuongorora nguva dzose. Ita maitiro ekugadzirisa kliniki, kusanganisira kuongorora kwekufambira mberi, kukura kwepfungwa uye kwepanyama, uye kuputika kwemapfupa, nguva dzese.
Kunyange zvazvo chinangwa chechirongwa chekurapa ndechekusimudzira serum TSH, TSH haigoni kumira mune vamwe varwere nekuda kweutero hypothyroidism zvichikonzera kugadziriswa kwepituitary-thyroid feedback. Kukundikana kwe-serum TSH kuderedza pasi pasi pe20 IU paawa imwechete mushure mekutangwa kwechirongwa cheYTOMEL kungaratidza kuti mwana haasi kuwana kurapa kwakakwana. Ongorora kutenderwa, muroti wemishonga inogadziriswa, uye nzira yekugadzirisa usati wawedzera kuwanda kweYTOMEL.
Secondary uye Tertiary Hypothyroidism
Chengeta serum T3 mazinga uye urambe uri mumamiriro akaenzana.
Raw Liothyronine Sodium (T3) powder (55-06-1) Kushandisa
Liyronronine inoshandiswa kurapa utachiona husingaitiki (hypothyroidism). Iyo inotsiva kana inopa hutachiona hwakawanda, iyo inowanzoitwa nehutachiona gland. Liyronronine isimbo yakagadzirwa nevanhu yehomoni yehomoni. Kuderedza utachiona hwehomoni kunogona kuitika zvakasikwa kana kana chirwere chetachiona chikuvadzwa nemirairo / mishonga kana kubviswa nekuvhiyiwa. Kuva nehomoni yakakwana yehutano kunokubatsira kuti ugare wakasimba. Kune vana, kuva nehomoni yakakwana yehutori kunovabatsira kukura nekudzidza zvakajairika.
Iyi mishonga inoshandiswawo kubata dzimwe mhando dzehutano hwehutano (dzakadai semamwe marudzi eGoiters, kanzera yekanda). Inogonawo kushandiswa kuedza mamwe marudzi ezvirwere zvehutano.
Tenga Lioxyronine Sodium (T3) poda kubva kuBuasas.com